सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 AnTuTu बाट जान सक्छ Androidsis
केही घण्टा अघि हामीले तपाइँलाई सामसु fromको आन्तरिक चुहावटको बारेमा बतायौं जुन प्रोसेसरले देखायो कि सैमसंग गैलेक्सी एस:: लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको स्नैपड्रैगन 7२० एसओसी।अब आधिकारिक प्रस्तुतीकरणको कुनै चिह्न छैन, तर सामसु mysको एउटा रहस्यमय उपकरणले एन्टुमा एक विशाल स्कोर बनाएको छ: score,, 820 .२।
यस रहस्यमय उपकरणको संख्या SM-8508S हो। हामीलाई थाहा छ सैमसंग ग्यालेक्सी नोट ले आंटुमा 5,, 69.702०२ अ scored्कहरू प्राप्त गर्यो ताकि हामी नोट दायराको स्टार phablet बाट बाहिर निस्कन सक्दछौं। ग्यालक्सी एस Ed एज + ग्यालेक्सी एस and र एस ge एज जस्तै प्रोसेसर हुनेछ गणना, यो स्पष्ट छ कि ग्यालक्सी S7 यस ईन्ग्मेटिक उपकरण हुन धेरै नम्बरहरू छन्।
एक सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 ले AnTuTu को स्कोरिंग रेकर्ड तोड्न सक्छ
अहिलेको लागि हामीलाई सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 को बारेमा कुनै कुरा थाहा छैन। केवल अर्को सामसु phone फोनले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820२० प्रोसेसरलाई धन्यवाद भन्न सक्छ र त्यो धन्यवाद नयाँ प्रणाली "फुर्ती" निर्माताले डिसेम्बरमा आफ्नो नयाँ प्रमुख प्रस्तुत गर्न सक्दछ।
के स्पष्ट छ के यो छ कि लुगा अन्तर्गत के लगाउँछ यो एसएम 8505०7420 एस मोडेल स्पष्ट रूपमा Exynos XNUMX XNUMX२० भन्दा धेरै शक्तिशाली हो। क्वालकॉमले विवादास्पद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 810१० भन्दा बढीको कारणले आएको असन्तुष्टिलाई हल्लाउन वास्तवमै शक्तिशाली प्रोसेसर सिर्जना गरेको छ? तपाईको शर्त राख्नुहोस् ...
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » एन्टु टुमा एक ईग्मेटिक स्यामसंग फोन,,, 95.972 .२ अंकमा पुगेको छ। स्यामसंग ग्यालेक्सी S7 स्न्यापड्रैगन 820 को साथ?
एन्ड्रोइड> आईओएस भन्यो
सत्य यो हो कि यो ब्लगले मलाई धेरै आश्चर्यचकित गर्दछ। के तपाईंले कहिँ पनि पढ्नु भएको छैन (दुर्लभ) कि यो नक्कली छ? ती सबैमा उनीहरूले यसलाई नक्कलको रूपमा घोषित गरे र तपाईले न केवल आफैंलाई सूचित गर्न थोरै गर्नुभयो, तर तपाईलाई विश्वास पनि छ। ब्रावो एन्ड्रोइड्सिस। एक कम ग्राहक।
Android> iOS लाई जवाफ दिनुहोस्